အဖေ ကျွန်တော် တစ်ခွက်ပဲ သောက်မယ် | မိုးစက်မှော်
Filed under: မိသားစု, အတွေ့အကြုံ —4Comments	06/03/2010
အဖေက သားကြီးကို အားကိုးတယ်။ သားကြီးကို ဆုံးမလိုက်ရင် အငယ်တွေပါ ဆုံးမပြီးသားဖြစ်မယ်လို့လည်း အဖေက တွက်ပုံရတယ်။ ကိုယ်က ငယ်ငယ်ကတည်းက အတွေးကဲသူဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့် ဘယ်လို ဘယ်ဖြစ်လို့ ဆိုတာတွေကို အမြဲလိုက်စဉ်းစားတယ်။ လွယ်တာကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။ လွယ်လွယ်လေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် တစ်ခုခုပဲမှားနေသလိုလို ကိုယ်ကထင်တတ်တယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ပုံစံက သွက်သွက်လက်လက် မရှိဘူး။ ငေးငေးမှိုင်မှိုင်ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ လူကြီးတွေတစ်ခုခုပြောတာကို နားထောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်က တစ်ခုခုကို အာရုံဝင်စားနေရင်ဖြစ်ဖြစ် ပါးစပ်ကြီးဟပြီး သတိလက်လွတ်လို ဖြစ်နေတတ်တယ်၊ တစ်ခါတလေ သွားရေတွေတောင် ကျနေတတ်တယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့ အဖေ့လက်ဖ၀ါးကြီးတွေကို ကိုင်ကြည့်ရတာ အားရလိုက်တာလေ၊ အဖေ့လက်ဖ၀ါးကြီးတွေက ကိုယ့်လက်ဖ၀ါးသေးသေးလေးတွေနဲ့စာရင် ဘာမှမှမဆိုင်တာ…အကြီးကြီးတွေမှကိုး။ အခုတော့ အဲဒီလိုလက်ဖ၀ါးကြီးတွေ ကိုယ့်မှာရှိနေပြီလေ။ အဖေ့ကို သတိရတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ့်စိတ်ပျက်အားငယ်မိတယ်ဆိုရင် အဖေ့ကို သတိရပြီး ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးကို တင်းတင်းစေ့ပြီး(ထော်ထော်ကြီးဖြစ်ပြီး စူပုပ်သွားတာပေါ့လေ) ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ထောင်မတ်ထားလိုက်တာ မသိတဲ့လူတွေကတော့ ဒီကောင် သိပ်ဘ၀င်မြင့်တယ်လို့ ထင်ကြလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်နဂိုပုံစံက ရယ်ပြုံးနေတတ်ပြီး သိပ်သဘောကောင်းပုံရတဲ့ မျက်နှာချိုလေးကိုး၊ ခုနလို တင်းတည်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆယ်နှစ်လောက်အသက်ပိုကြီးသွားတဲ့ မျက်နှာတင်းတင်းကြီး ရုတ်ချည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ အဖေ့နေတဲ့အခန်းလေးအကြောင်း စာဖွဲ့ပြချင်သေးတယ်။ အဖေနေတာက စောနကပြောခဲ့သလို သူ့အမေအိမ်။ အိမ်က နှစ်ထပ်သစ်သားအိမ်ဖြစ်တာမို့ အပေါ်ထပ်မှာက အခန်းတွေဖွဲ့ပြီး ကျန်တဲ့မောင်နှမတွေ နေကြတယ်။ အောက်ထပ်မှာက နှစ်ခန်းဖြစ်အောင် အလယ်က ကန့်ပြီး၊ တစ်ခန်းကိုတော့ သမီးတစ်ယောက်(အဖေ့ညီမ)က အိမ်လခပြန်ပေးပြီးနေသလို၊ နောက်တစ်ခန်းကတော့ အိမ်ငှားမိသားစုတစ်ခုနေကြတယ်။ အိမ်ခေါင်းရင်းက မြေပိုမြေစွယ်လေးထွက်နေတာမှာ ကားဂိုထောင်လောက်အခန်းလေးတစ်ခန်းဆောက်ပြီး မူလက ဘော်တယ်ကုလားကို ငှားစားခဲ့ပေမဲ့ တစ်အိမ်လုံးဖျက်ပြီး ကန်ထရိုက်တိုက်ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဘော်တယ်ကုလားကို ပထုတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာ အဖေက အဲဒီအခန်းမှာ နေပါတယ်။ အခန်းပေါက်ဝမှာရှိတဲ့ စည်ပင်မြောင်းကိုခွပြီး ဈေးဆိုင်ခုံကြီးချပြီး အဖေက ဈေးရောင်းတယ်။ ဈေးဆိုင်ခုံရှေ့ကနေ ကတ္တရာလမ်းမရောက်တဲ့အထိ သစ်ပင်လေးတွေမျိုးစုံကို အဖေကိုယ်တိုင် ၀ယ်ပြီးတစ်မျိုး၊ တောင်းပြီး ဒါမှမဟုတ် တခြားတစ်နေရာက ယူလာပြီးတစ်ဖုံ စိုက်ထားတာကြောင့် စိမ်းစိမ်းစိုစိုရှိတယ်၊ တချို့သစ်ပင်တွေမှာဆို ပန်းလေးတွေတောင် ပွင့်လို့လှနေတတ်တယ်။ အဖေက ရေလည်းတတ်နိုင်သလောက်လောင်းပေးတော့ သစ်ပင်လေးတွေက စည်ပင်ရှာတယ်။ သစ်ပင်တွေဝိုင်းနေတဲ့ကြားမှာမှ သူ့သားသမီးတွေလာရင် ဒါမှမဟုတ် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေလာရင် စကားပြောကြတဲ့အခါ ထိုင်နိုင်အောင်လို့ မြေစိုက်တိုင်လေးနှစ်တိုင်ပေါ် သစ်သားကျွန်းပြားလေးတစ်ချပ် ပစ်တင်ရိုက်ထားလိုက်တော့ လူတစ်ရပ်လောက်မြင့်တဲ့ သစ်ပင်အုပ်လေးကြားထဲမှာ ခုံတန်းလေးတစ်ခုရှိနေတယ်။
တကယ်တော့ ကိုယ်က အဲဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက အရက်ကောင်းကောင်းသောက်တတ်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဖေကိုတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ အဖြေပေးပြီး အဖေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ် သားအဖနှစ်ယောက် အရက်အတူသောက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီညနေခင်းလေးမှာတော့ အဖေ့ပန်းခြံလေးက ပိုပြီးလှနေခဲ့သလို အဖေကလည်း သူ့သားနဲ့ပထမဆုံးသောက်တဲ့ညနေခင်းမို့လား မသိပါဘူး။ တစ်ခွက်ပဲသောက်မဲ့ သားကြီး(ကိုယ်)မြည်းဖို့တောင် ငါးဥကြော်လေး အပြေးအလွှားသွားဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ အဖေမဆုံးခင်အထိ သားအဖနှစ်ယောက် သုံးလေးခါလောက် သောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သုံးလေးခါပဲ သားကြီးနဲ့အဖေ အရက်အတူ သောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့ သားကြီးနေရာကို သားငယ်လေး(ကိုယ့်ညီ)က ခပ်သွက်သွက်ဝင်ယူလိုက်လို့ပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ အဖေဟာ အရက်ကြောင့်ပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ် ကောလိပ်နောက်ဆုံးနှစ် အသက် ၂၃၊ အဖေက အသက် ၆၀ အရွယ်မှာပေါ့။
4 Comments: စိုပြေ
08/03/2010 at 1:09 pm	ကျွန်တော်ကတော့ အဖေနဲ့တစ်ခါမှမသောက်ဖူးသေးဘူး။
့ သွားပြန်တော့လည်း အမေ ကမကြိုက်ပြန်ဘူး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ သတိရစေတဲ့အတွက်
20/03/2010 at 1:55 pm	နင့် အဖေအကြောင်းဖတ်ရတာ ငါစိတ်ထိခိုက်တယ်ဟယ်
04/09/2010 at 5:18 am	ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ရတော့
မှတ်မှတ်ရရပဲ ဒီစာဖတ်နေတုန်း ဖေဖေ့ကိုလွမ်းမိသွားတုန်း
Reply	Kyaw Minn Naing
09/12/2010 at 1:52 am	Nice Post, good writing. Thanks.
« ၀တုတ်ကြီးမို့ မယူနိုင်ပါ
ကျွန်တော် မာနခဲ »